Homeयस्तो छ कारण
शास्त्रका अनुसार महिलाले झुक्किएर नि गर्नै नहुने यी ९ काम, यस्तो छ कारण !
August 12, 2018 Spnews Comments Off on शास्त्रका अनुसार महिलाले झुक्किएर नि गर्नै नहुने यी ९ काम, यस्तो छ कारण !
एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन् । महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा […]
June 25, 2018 Spnews Comments Off on लुकी लुकी चढ्छन् मानिसहरु, यस्तो छ कारण
अमेरिकाको हावाइ शहरमा ४००० मिटरको लामो भर्र्याङ छ जुन स्वर्ग जने बाटो भनेर प्रख्यत छ । यस सिडी चड्न त्याहाको सरकारले रोक लगए पनि मनिसहरु हरेक बर्ष सिडी चाड्न जने गर्छन । सुरक्षाकर्मीले देख्छन भनेर […]
कतारमा सैन्य आक्रमण गर्ने साउदी अरबको चेतावनी, यस्तो छ कारण
June 3, 2018 Spnews Comments Off on कतारमा सैन्य आक्रमण गर्ने साउदी अरबको चेतावनी, यस्तो छ कारण
रसियाली एस–४०० हवाई रक्षा प्रणालीलाई भित्राएमा कतारविरूद्ध सैन्य कारबाही गरिने साउदी अरबले चेतावनी दिएको फ्रान्सबाट प्रकाशित हुने ले मोन्डे दैनिकले जनाएको छ । रियादले फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोँलाई कतारले खरिद गर्न लागेको भनिएको एस–४०० बारे […]
९ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्दै, अब के हुन्छ ?
April 25, 2018 Spnews Comments Off on ९ हजार नेपालीलाई अमेरिकाले देश निकाला गर्दै, अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अन्तराष्ट्रि सञ्चार मध्यमका अनुसार अमेरिकी सरकारले करिब ९ हजार नेपालीलाई देश निकालाको तयारी गरेको छ । अमेरिकी सरकारले नेपालीहरुलाई दिँदै आएको टीपीएस सुविधा खारेज गरी स्वादेश फर्काउन लागेका हुन् । नेपालीहरुलाई दिँदै आएको […]
३ जनाको शव बंगलादेश लगिएन, यस्तो छ कारण
March 19, 2018 Spnews Comments Off on ३ जनाको शव बंगलादेश लगिएन, यस्तो छ कारण
पर्याप्त सूचना अभावका कारण बंगलादेशी तीन नागरिकको शव सनाखत हुन सकेको छैन । ती शवहरु शिक्षण अस्पतालमा नै छ । सनाखत भएका २३ शव सोमबार बंगलादेश लगिँदैछ । सनाखत भएका शव लैजान बंगलादेसी एयरफोर्सको विमान […]
लोप हुँदै पुरुषहरु, यस्तो छ कारण
January 23, 2018 Spnews Comments Off on लोप हुँदै पुरुषहरु, यस्तो छ कारण
एजेन्सी । वाई क्रोमोजोम पुरुषत्वको प्रतिक त्यति बलियो र टिकाउ नरहेको देखिएका छन्। यसमा लिङ्ग निधारण गर्ने एस.आर.वाई. नामक जीन रहे पनि अन्य खालका जिन थोरै रहने गर्छ । र, यो जीवनको अस्तित्वको लागि नभए नि हुने […]
शिल्पा पोखरेल र छवी ओझाबिचको सम्बन्ध टुट्दै, यस्तो छ कारण
January 8, 2018 Spnews Comments Off on शिल्पा पोखरेल र छवी ओझाबिचको सम्बन्ध टुट्दै, यस्तो छ कारण
काठमाण्डौ । नेपाली चलचित्रको क्षेत्रमा छवि ओझा कुनै नौलो नाम होईन । ओझा चलचित्र निर्माताको राम्रै छवि बनाएका सर्जक हुन । पाँच बर्ष पहिले नायिका रेखा थापासँगको सम्बन्धबाट अलग्गिएका छवि ओझा पछिल्लो समय नायिका शिल्पा […]
नेपालीहरु बत्ति बालेर तथा नाङ्गो भएर यौन सम्पर्क गर्न चाहँदैनन्, यस्तो छ कारण
December 30, 2017 Spnews Comments Off on नेपालीहरु बत्ति बालेर तथा नाङ्गो भएर यौन सम्पर्क गर्न चाहँदैनन्, यस्तो छ कारण
लामो समयको अनुसन्धान गरिरहेकी करुणा नेपाली यौन मनोविज्ञान जटिलतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको स्वीकार गर्छिन् । नेपालीहरुको यौन ब्यवहार एवम् त्यसले सृजना गरिरहेको तनावले धेरै युगल जोडीहरुको वैवाहिक सम्बन्ध टुट्दै गएको उनको अनुसन्धानले देखाएको छ । […]
प्रेमिकाले दिएको उपहार ४७ वर्षसम्म हेरेका छैनन् यी व्यक्तिले, यस्तो छ कारण
December 28, 2017 Spnews Comments Off on प्रेमिकाले दिएको उपहार ४७ वर्षसम्म हेरेका छैनन् यी व्यक्तिले, यस्तो छ कारण
एजेन्सी: आफ्ना प्रेमी वा प्रेमिकाले दिएको उपहार खोल्न प्रायः मानिसले गर्छन् । तर क्यानाडाका एक प्रेमीले क्रिसमसका अवसरमा आफ्नी प्रेमिकाले दिएको उपहार ४७ वर्षसम्म पनि खोलेर हेरेका छैनन् । एड्रियन पियर्स नामका ती व्यक्तिले ४७ वर्ष […]
बुधबारको दिन माइत आएकी छोरीलाई घर नपठाउनुस्, यस्तो छ कारण …
December 27, 2017 Spnews Comments Off on बुधबारको दिन माइत आएकी छोरीलाई घर नपठाउनुस्, यस्तो छ कारण …
एजेन्सी । यात्रा गर्नुपूर्व कयौँ कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । जोतिषिय मान्यता अनुरुप यात्रा गर्नुपूर्व धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ नत्र यात्रा निकै कष्टकर पनि बन्नसक्छ । जोतिषिय मान्यता अनुसार भर्खरै बिहे भएकी छोरीले बुधबारको दिन […]